Hawlgal ka dhan ah laba cadow oo ka socda Gobolka Hiiraan – AfmoNews
Hawlgal ka dhan ah laba cadow oo ka socda Gobolka Hiiraan
Ciidanka Xoogga Dalka ayaa Gobolka Hiiraan ka bilaabay hawlgal lagu sheegay inuu yahay mid waddo sifeen ah, si deegaanada u dhaxeeya Degmooyinka Beledweyne iyo Maxaas looga saaro Shabaabka ku sugan.
Sidoo kale hawlgalka ayaa waxaa barbar socdo mid kaloo wadadaasi looga nadiifinayo jidgooyooyin la sheegay inay u yaallaan maleeshiyaad qaab beeleed u abaabulan.
Korneyl Cabdullaahi Barre, Abaanduulaha Guutada 5aad ee Qaybta 27aad ee Ciidanka Xoogga Dalka ayaa sheegay in ujeedkoodu uu yahay inay cagta mariyaan Shabaabka ku sugan inta u dhaxeyso Beledweyne iyo Maxaas, sidoo kalana ay wadadaasi ka qaadaan isbaarooyinka u yaala buu yiri kooxaha burcadda ah.
Abaanduulaha oo la hadlay Warbaahinta gudaha ayaa ku hanjabay in kooxaha burcadda ay ula dagaalami doonaan, si lamid ah buu yiri sida Al Shabaab oo kale.
Abaanduulaha ayaa intaa ku daray inaanay wax asxaan ahi u samayn doonin kooxaha burcadda, ee caadeystay inay dadka ku baartaan wadada sida uu yiri, isagoona kooxahaasi uga digay inay ka waan-toobaan falalkaasi, ciddii lagu qabtaana ay tallaabo sharci ah ka qaadi doonaan.
Kooxaha wadooyinka ku dhibaateeya dadka socotada ah ayaa lagu tilmaamaa cadow kale, oo dhibaato muuqata ku haya shacabka Soomaaliyeed.